Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo daahfurtay xuska todobaadka wacyi gelinta ka hortagga si qaldan u isticmaalka Antibaayootikada “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo daahfurtay xuska todobaadka wacyi gelinta ka hortagga si qaldan u isticmaalka Antibaayootikada “SAWIRRO”
Masuuliyiinta Wasaradda caafimaadka Soomaaliya , dhaqaatiir , aqoonyahano iyo marti sharaf kale ayaa ka qeyb galay munaasabaddan oo daahfur u aheyd xuska todobaadka wacyigelinta ka hortagga si qaldan u isticmaalka antibaayootikada oo dhibaato weyn ku heysa dunida oo dhan.
Dhaqaatiir, aqoonyahanno iyo qubaro kale ayaa madasha uga qeyb galay dood ku saabsan dhibaatooyinka laga dhaxlo daawooyinka Antibaayootikada ee sida qaldan loo isticmaalo iyo sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya Dr Cabdullahi Xaashi Cali ayaa sheegay in dalka ay ka jirto dhibaato weyn oo dhanka isticmaalka daawooyinka Antibiyootikada ah, loona baahanyahay in si wada jira looga hortago.
Wasiir ku xugeenka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya Mudane Maxamed Saciid Cabdullahi ayaa sheegay in Xildhibaannada golaha shacabka ay ka rajeynayaan inay goor dhow meel mariyaan sharciga daawada oo ka hortagi doona dhibaatooyin badan oo dalka ka jira.
Munaasabada xuska todobaadka wacyigelinta ka hortagga si qaldan u isticmaalka antibaayootikada oo socon doonto muddo hal todobaad ah ayaa kusoo aadeysa xilli maanta Xildhibaannada golaha shacabku ay akhrinta koowaad marsiiyayn Sharciga daawada Qaranka oo muhiimad weyn u leh bulshada Soomaaliyeed.
W/D: Xabiib Axmed Cali
Madaxweynaha Hirshabelle oo u mahadceliyay dadkii ka qeybqatay gargaarkii shacabka Beledweyne “SAWIRRO”
Marwada Koowaad ee Dalka oo Mareykanka kaga qeyb gashay kulan loogu gurmanayo dadka fatahaaddu saameysay